I-China Custom logo eyenziwe ngezandla I-Luxury Paper jewelry jewelry umhleli nge-Mirror Drawer ring Earring Jewellery box Manufacturer and Supplier | I-Huaguang
I-logo yangokwezifiso eyenziwe ngokwezifiso ye-Luxury Paper Jewellery Box Organiser enebhokisi le-Mirror Drawer Ring Earring Jewellery
I-Jewelry Box Organiser ene-Mirror
Uhlobo Lwamaphepha: I-Paperboard
Okufakiwe Yokuxhumana: PC eyodwa polybag noma imfuneko sakho
Itheku: Xiamen / Fuzhou
Isikhathi esiholayo :
Ubuningi (Amabhokisi) 1 - 500 501 - 1000 > 1000
Est. Isikhathi (izinsuku) 15 20 Kuxoxiswane
Ukwenziwa nokukhiqizwa kwamabhokisi wobucwebe kususelwa ekwakhiweni kobucwebe. Ingaphakathi livamise ukwakhiwa ngezikhala eziningi ukuvimbela imihuzuko engadingekile ebangelwe ukuthintana nobucwebe. Amanye amabhokisi wobucwebe ayahlukahluka ngesakhiwo sangaphakathi ngokuya kobujamo obukhethekile nezinto zokwakha. Ukusetshenziswa okuyinhloko kwebhokisi lobucwebe, ukuze kulondolozwe ubucwebe obuhlala njengomphumela omusha wokubukeka, ukuvimbela uthuli nezinhlayiya ezisemoyeni ekubukekeni kobuso bezinto zokuhloba kanye nokugqoka, futhi kunikeze nabaqoqi bezinto zokuhloba ukuthanda indawo enhle yokuthola.
Imvamisa kufakwe izinto ezithambile futhi iqukethe imicu elwa ne-anti-oxidation kanye ne-anti-wear yokuvikela ukugqoka kobucwebe. Ukhiye noma inhlanganisela yokukhiya yesitayela esihambisanayo ifakiwe ukuvikela ukuphepha kobucwebe. Leli bhokisi lobucwebe bephepha ikakhulukazi elezingane lokuqoqa izesekeli ezincane, ngakho-ke akukho ukukhiya. Ibhokisi lobucwebe bephepha, elinobungani obuningi emvelweni, intengo ivuma kakhulu. Idizayini epinki nayo ihambisana nenhliziyo yentombazanyana, sengathi kuleli bhokisi lobucwebe, iyintombazane enhle enhle. Lo undlunkulu omncane webhokisi lobucwebe mncane, kepha unayo yonke imisebenzi edingekayo:
Idizayinelwe ukuvikela futhi ivikele indandatho yakho eyigugu, iphedi yendandatho imvamisa iqukethe isethi yamapayipi wesipanji anemishwe. Ngaphezu kweringi, ama-cufflinks noma amacici nakho kuyisinqumo esihle.
Icici lokulungisa imbobo / icici lokulungisa lisetshenziselwa ukulungisa nokuvikela izesekeli zakho zamacici. Imvamisa kunikezwa izimbobo zamacici kusihlukanisi sokubamba icici, noma ngemichilo yamacici okushefa kusetshenziswa indawo yekhava yebhokisi, noma nge-padding ekhishwayo enezimbobo zamacici egumbini.
Isembozo sekhadi levemvane ngokuvamile liyi-flannelette enekhadi levemvane elakhiwe egumbini ukumboza ubucwebe bakho obuyigugu. Amakhadi e-Butterfly angasetshenziswa kuphela njengokubamba, kodwa futhi angasetshenziswa ukugoqa imigexo yakho ende futhi emincane ukuvimbela ukushelela okungahleliwe; Noma yenza ungqimba, uhlukanisa ama-trinkets akho phezulu.
Ukubukwa kwesongo / ukugoqwa kwesongo kuklanyelwe ukuvikela nokuvikela isongo noma iwashi lakho.
Ingwegwe yomgexo isetshenziselwa ukuvikela nokuvikela isongo lakho lomgexo, imvamisa ngendlela ye-clasp noma i-clasp. Okulandelayo kuvame ukumiswa ngesikhwama esivulekile sokuvula ukuze ubambe umgexo olengayo.
Ama-cubicles aklanywe ngosayizi nobukhulu obuhlukahlukene, ukuze ubucwebe bakho obuyigugu bubekwe ngokuhlukile. Imigexo emide nezacile ijwayele ukwakhelwa imigexo, kuyilapho eyizikwele yenzelwe amasongo, ama-brooches, amacici, okokufaka izinwele, o-cufflink nezinye izesekeli ngokuya ngosayizi nomthunzi.
Iyiphi intombazanyana engeke ithande ibhokisi eliyigugu kanjena?
Langaphambilini Ibhokisi lamathoyizi lesikhwama sephepha lesikhadibhodi sezingane ngesibambo
Olandelayo: Ibhokisi lokugcina iphepha lasehhovisi noma lasekhaya elinamandla amakhulu lingasongwa
Amabhokisi Wokugcina Amakhadibhodi
Ibhokisi lobucwebe elenzelwe wena uqobo
Amabhokisi Esipho Esincane
Ibhokisi Lesipho Lewayini
Amakhadibhodi Ubucwebe Ibhokisi Amantombazane Ubucwebe bokufaka ...
Amakhadibhodi Makeup Ibhokisi noma Ubucwebe Ibhokisi Nge Mirror ...
Ibhokisi le-logo elenziwe ngezandla elenziwe ngezandla elenziwe ngezandla
UKUBONISANA NGAMAHHALA 0086-18850140115
IKHELI Isakhiwo 4, No. 20, Zhaoyu Road, Gaishan Town, Fuzhou, Fujian, China
Ikhofi ephrintiwe ngokwezifiso yekhofi engu-350g ibhokisi elingaphandle lekhadi elimhlophe
Ibhokisi lephepha lokunakekelwa kwesikhumba lifakwa ngebhokisi lohlobo lwencwadi le-PVC
© Copyright - 2020-2023: Wonke Amalungelo Agodliwe.